रोल्पामा आफ्नी १९ बर्षे अविवाहित छोरीलाई किन लगाइदिइन् उनकी आमाले परिवार नियोजनको सुई? – Kavrepati
Home / समाचार / रोल्पामा आफ्नी १९ बर्षे अविवाहित छोरीलाई किन लगाइदिइन् उनकी आमाले परिवार नियोजनको सुई?
रोल्पामा आफ्नी १९ बर्षे अविवाहित छोरीलाई किन लगाइदिइन् उनकी आमाले परिवार नियोजनको सुई?
admin July 14, 2021	समाचार Leaveacomment 82 Views
रोल्पा जिल्ला माओवादी संघर्षको उद्गम स्थल हो । देशबाट माओवादीको संघर्ष सकिएपनि त्यसको प्रभाव भने समाजमा अझैं बाँकी नै छ । यस्तै एक दुखद समाचार रोल्पाबाट आएको छ । त्यहाँ एक आमाले आफ्नी १९ बर्षे अविवाहित छोरीलाई लामो समययता परिवार नियोजनको अस्थायी साधन तीन महिने सुई लगाइदिने गरेकी छन् ।
माओवादी कालमा हिं सा समेत खेपेकी सरलाका तीनमध्ये एक छोरी मानसिक रूपले अपांगता भएकी छन् । विपन्न परिवारकी उनी दिनभर मजदुरी गर्न गएको समयमा उमेर पुगेकी छोरी जथाभावी हिड्न थालेपछि सावधानी अपनाउँदै उक्त सुई रोज्नुपरेको बताउँछिन् ।
खराब नियत भएका पुरुषहरूका कारण छोरीको गत साल गर्भपतन गराउनुपरेपछि सरलाले छोरीका लागि तीन महिने सुई विकल्पका रूपमा रोजेकी हुन् । ‘म दिनभर मजदुरी गर्न जान्छु । छोरी एक्लै यताउति हिँड्छे । पोहर कुन चाहि पा पी ले छोरीमाथि जथाभाबी गरेछ । जसोतसो अस्पताल लगेर बच्चा फाल्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छिन्, ‘दिशा, पिसाब र महिनावारीसमेत स्याहार्न नसक्ने छोरीलाई मन दुखाएर भए पनि तीनमहिने सुई लाइदिने गरेकी छु ।’
माओवादी द्व न्द्व ताका २०६० सालमा एक पक्षबाट घरछेउमै सरलामाथि अनैतिक काम भएको थियो । त्यही पिरले उनका पति अर्को वर्ष २०६१ सालमा बिते । उपचार अभावमा आठ वर्षका छोरासमेत गुमाएकी सरला यतिबेला बस्ने ठाउँ नभएपछि माइतीको शरणमा छिन् ।
‘दुई छोरी बिहे गरेर घर गइसके। छोरो सानैमा बितेको हो । आफ्नो भन्ने काही छैन । अहिले माइतीघरमा बसेकी छु ।’ कहीँकतैबाट कुनै सहयोग नपाएकी सरलाको यो समाचार नागरिक दैनिकका लागि रोल्पाबाट दिनेश सुवेदीले लेखेका छन् । प्रतीकात्मक फोटो
Previous बालकोट पुगेर घरको बार्दलीबाट ओलीको भाषण: ‘माधव नेपाल लाजशरम पचेकालाइ अब एमालेमा कुनै ठाउँ छैन’ (भिडियो सहित)
Next एउटा भावुक भेट : सीता दाहालले विप्लवलाई चिनेपछि…